Zavakanto & Kolontsaina · Febroary, 2009 · Global Voices teny Malagasy
HaisoratraHehyMozikaSarimihetsikaSaripikaTantaraZavakanto & Kolontsaina
Zavakanto & Kolontsaina · Febroary, 2009
Janoary 2022 7 Lahatsoratra
Septambra 2021 4 Lahatsoratra
Avrily 2021 7 Lahatsoratra
Oktobra 2020 8 Lahatsoratra
Desambra 2019 12 Lahatsoratra
Mey 2019 10 Lahatsoratra
Avrily 2019 16 Lahatsoratra
Novambra 2018 21 Lahatsoratra
Jolay 2018 37 Lahatsoratra
Avrily 2018 32 Lahatsoratra
Febroary 2018 24 Lahatsoratra
Oktobra 2017 31 Lahatsoratra
Septambra 2017 35 Lahatsoratra
Jolay 2017 41 Lahatsoratra
Mey 2017 40 Lahatsoratra
Avrily 2017 18 Lahatsoratra
Febroary 2017 19 Lahatsoratra
Oktobra 2016 23 Lahatsoratra
Aogositra 2016 23 Lahatsoratra
Jolay 2016 17 Lahatsoratra
Jona 2016 25 Lahatsoratra
Mey 2016 23 Lahatsoratra
Avrily 2016 18 Lahatsoratra
Marsa 2016 22 Lahatsoratra
Janoary 2016 25 Lahatsoratra
Desambra 2015 13 Lahatsoratra
Oktobra 2015 19 Lahatsoratra
Jolay 2015 16 Lahatsoratra
Mey 2015 13 Lahatsoratra
Marsa 2015 13 Lahatsoratra
Jolay 2014 13 Lahatsoratra
Jona 2014 8 Lahatsoratra
Jolay 2013 6 Lahatsoratra
Avrily 2013 8 Lahatsoratra
Janoary 2013 17 Lahatsoratra
Novambra 2012 14 Lahatsoratra
Oktobra 2012 11 Lahatsoratra
Febroary 2012 12 Lahatsoratra
Janoary 2012 13 Lahatsoratra
Novambra 2011 10 Lahatsoratra
Oktobra 2011 9 Lahatsoratra
Septambra 2011 8 Lahatsoratra
Jolay 2011 11 Lahatsoratra
Janoary 2011 11 Lahatsoratra
Oktobra 2010 14 Lahatsoratra
Jona 2010 6 Lahatsoratra
Mey 2010 8 Lahatsoratra
Jolay 2009 5 Lahatsoratra
Mey 2009 11 Lahatsoratra
Desambra 2008 21 Lahatsoratra
Aogositra 2008 4 Lahatsoratra
Jolay 2008 9 Lahatsoratra
Avrily 2008 11 Lahatsoratra
Janoary 2008 21 Lahatsoratra
Desambra 2007 6 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Zavakanto & Kolontsaina tamin'ny Febroary, 2009
Maraoka: matsiro fotsiny amin'izao!
Maraoka 26 Febroary 2009
Tahaka ny resaka hanina avokoa no resaka tao amin'ny blogoma (bolongana maraokana) tamin'ity herinandro ity. Iray amin'ny heverina fa sarotra sy matsiro indrindra manerantany ny Moroccan cuisine (nahandro maraokana) izay avy amin'ny nahandro Arabo, Espaniola, Tiorka, Jiosy, ary fomban-drazana Amazigh sady fantatra amin'ny fampiasana anana sy episy (mpampatsiro hanina). Mahalala...
Broney: Famatsiana ny tra-boinan'ny tondra-drano
Broney 26 Febroary 2009
Satria singa iray ny ezaka fanangonana ireo fanomezana ho amin’ity famatsiana ity, dia narafitra mandritra ny herinandro vitsivitsy tao Brunei ny hetsika malala-tanana entina hamatsiana ireo tra-boina tamin’ny tondra-drano. Ny oram-baratra tamin’ny volana lasa teo dia nahatonga tondra-drano sy fihotsahan-tany tao amin’ny firenena, izay nandrava trano maro misy fianakaviana miisa hatrany amin’ny 200 no mihoatra, nahaverezana tany sy voly antapitrisany
Ny Balkana: “An’iza ity hira ity?”
Albania 19 Febroary 2009
Namoaka ny tahirin-kevitra “An’iza ity hira ity” ny mpitoraka bolongana maro Masedonina tamin’ny alalan’ny Bulgariana iray Talen’ny Adela Peeva izay ao amin’ny blaogin’izy ireo ihany ary nanomboka niresaka ity tantara ry zareo. Nalaina horonantsary io tahirim-pahalalana io ho fitarihan-kevitra ka ity talen’ny Adela Peeva ity no nahita izany nandritra ny fiara-misakafo hariva niaraka tamina namana (Masedoniana, Serba, Grika, ary Tiorika (Turk)) tao Istambul, ka tamin’izany no nilazan’izy rehetra hoe ny hira mandeha ao anatiny dia avy any amin’ny tanin’izy ireo.
India: Mahatohitra ny atin'akanjo mavokely
Azia Atsimo 19 Febroary 2009
Any amin'ny toerana sasan'i India, mety ho ratsy ho an'ny vehivavy sy ny fiandrianan'ny mpivady ny fankalazana ny fetin'ny mpifankatia (St Valentin), araka ny lalana amin'ny fifehezan-tena dia manapaka fa ho enjehina ireo mpivady sy vehivavy izay mifampitantana na eny amin'ny toeram-pisotroana zava-pisotro.
Amin’ny fetin’ny mpifankatia: Ampianaro mitoraka biloagy (na mamahana bolongana) ny olon-tianao.
Fanabeazana 17 Febroary 2009
Ny andron’ny mpifankatia (ny 14 febroary) izay andro natokana ho an’ny fitiavana, fisakaizana ary fifaneraserana. Inona ary no fomba tsara indrindra mba ahafahana manamarika ny fahafahana hanararotra hampianatra ny olon-tianao hitoraka bilaogy na hamahana bolongana tsikelikely (micro-blog)?
USA: Manambady noho ny Fitiavana sy ny Firenena
Amerika Avaratra 17 Febroary 2009
Na ny fitiavana, na ny viza (visa), na ny fanapahan-kevitra ny hivady dia zavatra tsy moramora. Ao Etazonia izay isian’ny olona mpifindra monina “Tsy ara-dalana” miisa 12 lavitr’isa, dia ny firaiketam-pitia sy ny fampakaram-bady Amerikana no fomba iray ahafahana mamaha ny olana ho ara-dalana. Mitantara ireo mpitoraka blaogy mpifindra monina.
Etazonia: Amerikana (Mena Hoditra) “Eny, mahavita izahay”
Rehefa tsy taza-maso nandritra taon-jato maro, dia miha-mitombo ny fampiasan’ny teratany Amerikana (Indiana) ao Etazonia ny blaogy sy ny gazetim-pirenena anterineto mba ampisehoana sy itehirizana ny zo sy ny fombafomba fiainan’izy ireo. Manana ny antony vaovao ho feno fanantenana ireo tompon-tany Indiana tamin’ny fifidianana an’I Filoha Awe Kooda Bilaxpak Kuuxshish (Anarana nomena an’I Barack obama avy amin’ny foko Crow).
Armenia: Fifangaroan'ny fomba vaovao sy fahagola amin'ny andron’ny mpifankatia (St Valentin)
Armenia 17 Febroary 2009
Heverina fa ny vondrona sisa tavela ela indrindra any Armenia dia ny fiangonana Apostolika, niorina ny taona 301 talohan’I Kristy, no fikambanana Kristianiana nasionaly antitra indrindra eto an-tany. Fa nandritra ny 1700 taona taty aoriana dia mbola tavela ny fombafomban’ireo tsy mpino tao amin’ny firenena, eny fa na dia tafiditra tao anatin’ny datin’andro kristiana aza izany ankehitriny. Raha toa ka izao tontolo izao no manamarika ny fetin’ny mpifankatia, dia mankalaza ny mitovy amin’izany fombafomba izany koa ny Armenianina-Trndez.
Andron'ny mpifankatia, tatitra manokana: Fitiavana be avy any Ejypta
Ejipta 15 Febroary 2009
Ity no fotoana iray amin'ny taona izay hanomboanareo hino fa ny fiainana dia saika voninkazo sy sokola . Irery na olon-droa, mpomba na mpanohitra ny andron'ny mpifankatia dia samy tsy maintsy miatrika ny hadalàna ben'ny volana Febroary. Na tia na tsia , ianareo dia tsindrian'ny nonorsa , voninkazo, boaty, ary ...
Korea: Antony fito hametrapetrahan'ny vehivavy anao
Korea Atsimo 15 Febroary 2009
Misy hafatra iray manintona milaza antony fito mahatonga ny lehilahy ho voapetrapetraky ny vehivavy rehefa miresaka fotoana sy manome torolàlana ihany koa ny amin'ny fomba tokony hataonao lehilahy hisorohana an'izay fahavoazana lehibe izay. Aza dia mino azy ity 100%. Tsy voatery ho marina foana mantsy ilay izy. […]처음 만나자 마자...